Dinastia kajara - Wikipedia
Ny dinastia kajara dia fianakavia-mpanjaka iraniana (persiana) manam-piavana torka, izay avy ao amin'ny foko kajara, izay nanapaka an'i Iràna tamin'ny taona 1789 hatramin'ny taona 1925. Atao hoe سلسله قاجار‎ / Selsele-ye Qājār izy amin'ny teny persana. Nanapaka an'i Iràna manontolo ny Kajara tamin'ny taona 1794, rehefa nanongana an'i Lotf 'Ali Khan, ilay shah farany avy amin'ny dinastia Zanda, ka nanamafy ny fiandrianam-pirenen'i Iràna sy ny fahefany amin'ny ampahany lehibe amin'i Kaokazy. Tamin'ny taona 1796 dia naka tanànan'i Mashhad mora foana i Mohammad Khan Qajar, ka nanapitra ny fanjakan'ny dinastian'ny Afsarida. Tamin'izay no nametrahana an'i Mohammad Khan ho shah taorian'ny ady famaizana nataony tamin'ny Jeorjiana fehezin'i Iràna. Tao Kaokazy dia nihavery tsikelikely ny tanin'i Iràna nofeheziny ny Kajara tamin'ny ady nifanandrenany tamin'ny Rosiana nandritra ny taonjato faha-19, ka isan'izany i Jeorjia sy i Dagestàna sy i Azerbaijana ary i Armenia.
Ny Fanjakana kajara tamin'ny taona 1900.
1.2 Ireo shah nifandimby
2 Lisitr' ireo andriamanjaka nifandimby
Tamin'ny taona 1796, taorian' ny fionganan' ny fianakavia-mpanjaka Zanda sy ny Afsarida, i Agha Mohammad Khan ao amin' ny fianakaviana Kajara no nanjaka tokana tao Iràna. Tsy ela taorian'izay (taona 1797) anefa dia novonoin'ireo mpanompony izy. Satria tsy nanan-janaka izy dia i Fath-Ali Shah izay zanaky ny iray tampo aminy no nandimby azy. Ny fanjakan'i Fath-Ali Shah dia nitrangan'ny fahaverezan-tany taorian'ny ady nifanaovany tamin'ny Rosiana tamin'ny taona 1804-1813 sy tamin'ny taona 1826-1828. Maty tamin'ny taona 1834 i Fath-Ali ka ny zafikeliny no nandimby azy, dia i Mohammad Shah.
Ireo shah nifandimbyHanova
Lisitr' ireo andriamanjaka nifandimbyHanova
Ireto ireo nifandimby nanapaka:
Agha Mohammad Shah (1786 – jona 1797)
Fat'h Ali Shah (jona 1797 – 23 oktobra 1834)
Mohammad Shah (23 oktobra 1834 – 4 jolay 1848)
Naser al-Din Shah (4 jolay 1848 – 1 jona 1896)
Mozaffar ad-Din Shah (1 jona 1896 – 8 janoary 1907)
Mohammad Ali Shah (8 janoary 1907 – 16 jolay 1909)
Ahmad Shah (16 jolay 1909 – 31 oktobra 1925)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinastia_kajara&oldid=1011374"
Dernière modification le 15 Mey 2021, à 09:19
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 09:19 ity pejy ity.